Balihoo: Ahịa akpaaka mpaghara | Martech Zone
Fraịdee, June 29, 2012 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Taa, anyị nwere Shane Vaughan na redio show na-ekwurita banyere ngwa ahia ahia nke obodo. Shane bụ CMO nke Balihoo, ụlọ ọrụ na-enye ọrụ akpaaka ahịa mpaghara. Balihoo bu uzo eji eme ngwa ahia nke na aru oru ndi ulo oru ndi nwere ahia ahia nke obodo, dika ndi mmadu, ndi na ere ahia ma obu ndi oru. Ihe atụ yiri Ndị dọkịta 1800, Geico, MatressFirm ole na ole aha.
Gee ntị na Ajụjụ ọnụ anyị na Shane Vaughan
Balihoo bu onye n’enyemaka nke teknụzụ na ngwa ọrụ akpaaka nke mpaghara maka ụdị mba nwere mkpa ahịa obodo. Balihoo na-eme ka azụmaahịa ụlọ ọrụ na ọkwa mpaghara wee na-enye ụdị mba zuru oke ọhụụ na mmemme ahịa na mpaghara niile.
Shane Vaughan na ahịa nke mpaghara:
Balihoo kọwara mkpa na uru nke akpaaka azụmaahịa mpaghara:
Iru olile anya dị nso na nzụta - Omume zụrụ ndị ahịa agbanweela. A na-eji weebụ weebụ eme ihe ugboro ugboro na ọtụtụ ụdị mgbasa ozi na-etinye n'ime usoro mkpebi mkpebi. Mpaghara akpaaka na-enyere ndị mba aka ijikwa njikwa ogologo na usoro nkwukọrịta na ire ahịa.
Wepụ ịdabere na ndị mmekọ mpaghara na ndị mmekọ - Were ọrịre ahịa obodo gị wee chọta ya. Iru ọtụtụ ahịa dị na mpaghara dị ka mgbalị dị ka ịme otu mkpọsa ma nweta nghọta na ahịa mpaghara site na nchịkọta ya mere, ị nwere ike melite ngbasa mgbasa ozi mba na ntinye ego.
Nata n'oge, mkpokọta nchikota nke mgbali ahia nke obodo - Jiri mpaghara nchịkọta iji chọpụta usoro ịzụ ahịa dị iche iche ma melite mbọ mgbasa ozi mba.
Search na-elekọta mmadụ na-akwọ ụgbọala ahịa mpaghara nke ọma o zughi oke maka udiri ahia ndia inwe mba. Ndị ahịa na azụmaahịa na-enyocha mpaghara na-eji nyocha ọchụchọ ala. Ọbụna na-enweghị obodo okwu, search maqbx chekwebe ide geographic ezubere iche dabere na ọnọdụ nke onye ọrụ… ma ọ bụ na-enwe mmetụta site na onye ọrụ na-elekọta mmadụ na netwọk. N'aka ozo, otutu agwa achoro ime ihe ichoro site na uzo ala ma apughi ileghara ya anya.
Balihoo awade enyem aka na websaiti, Mgbakwunye ahia, ahia ahia na mgbasa ozi, na ulo oru mgbasa ozi n’otu ngwugwu nke n’enye ndi ahia obere ikike ka ha di nfe ijikwa ahia ha ma ghota ebe nloghachi na itinye ego n’eme.
Tags: Balihooahia obodoakpaaka ahịa mpagharanchọta mpagharamarketingshane akwa